musha NFL Vatambi Bio Tom Brady Mwana Wechiitiko Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Football Genius inonyanya kuzivikanwa nezita rezita "Tom Terrific".
Our Tom Brady Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe wenguva dzese-superstars munhoroondo yeAmerican nhabvu.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Tom Brady's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Tom Brady Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga kuenda, Thomas Edward Patrick Brady Jr. akazvarwa pazuva re3rd yaNyamavhuvhu 1977 kuSan Mateo muCalifornia, United States.
Aive wechina wevana vatatu akazvarwa kuna amai vake Galynn Patricia Brady uye kuna baba vake Tom Brady Sr (muzvinabhizimusi).
Nezvemhuri yake, Brady ndudzi yeAmerica yemhando yakachena neIrish, Swedish, Norwegian uye Polish midzi.
Kukura muSan Mateo pamwe nevabereki vake nehanzvadzi nhatu dzakura, Maureen, Julie naNancy, wechidiki Brady akaunzwa kuAmerican Nhabvu nevabereki vake vaida zvemitambo vaive vatsigiri veSan Francisco's 49ers.
Mukomana mudiki uyo aigara achitakurwa nevabereki vake kuti vatarise nhabvu mitambo yaitora chikamu mumutambo mukati mevhiki nekutamba nhabvu inokwikwidza nehanzvadzi dzake.
Hazvina kutora nguva refu asati aitawo fan-hard fan yeSan Francisco 49ers, akawana chidhori chenhabvu mune ane mukurumbira quarterback Joe Montana, uye akaenda kumusasa wenhabvu kwaakadzidziswa se quarterback.
Kuwedzerwa kumitambo yaBrady yehucheche yaive basketball, baseball uye zvakanyanya kukosha, gorofu mutambo uyo wakaratidza kuti anovenga zvakadii kurasikirwa.
“Handikwanise kukuudza kuti mangani makirabhu egorofu andakatyora ndiri mwana ane makore gumi. Pese pandinorova pfuti yakaipa, ndaizoedza kupaza kirabhu yangu. Ndakambobvisa TV yedu nemutambo wevhidhiyo.
Ndakakanda remote nepahwindo. Pese pandinenge ndarasikirwa, ndaingokanda fiti. Ndozvandaive ndichikura. Ndinofungidzira kuti zvichiri zvimwe chete. ”
Anoti Brady wehuduku hwake mukukwikwidza.
Tom Brady Dzidzo:
Chinozivikanwa pakati pedzidzo yaBrady yaive dzidzo yake yechikoro chepamusoro pa Junipero Serra High Chikoro muSan Mateo.
Paaive kuchikoro chesekondari, Brady akatanga kutamba nhabvu yakarongeka paakange ari mugiredhi repfumbamwe, chiitiko chakaramba chichiitika kusvika apedza kudzidza mu1995.
Paakapedza chikoro chesekondari, Brady akadhindwa neMontreal Expos kuti atambe baseball. Wechidiki, zvakadaro, akaramba kupihwa nekubvuma bhezari kuYunivhesiti yeMichigan muna 1996.
Tom Brady Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Yakanga iri payunivhesiti iyo 19-makore-ekukura Brady akanyora avhareji kutanga munhabvu nekushandisa yakawanda nguva padivi pane panhandare yenhabvu.
Izvi zvaive nekuda kwekuti aive wechitatu-tambo quarterback mukati memwaka wake wekutanga mwaka kuMichigan.
Brady, zvisinei, akashandisa nguva yacho nemusoro bhuku rekutamba rechikwata nekushanda nesimba pamutambo wake.
Nekuda kweizvozvo, akave Michigan yekutanga quarterback muna 1999 uye pasina nguva yakareba mushure, akabatsira timu yake kuOrange Bowl Kukunda.
Kukunda kwakasanganiswa nerekodhi rekodhi yemitambo mwaka iwoyo yakaita Brady zita rekubatana naye mukuita kwemakota uye kwakamuunza kunzvimbo yepedyo yehunyanzvi.
Tom Brady Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
2000 raive gore iro Brady akachinja pro mushure mekunyorwa neNew England Patriots. Zvakare akazviwana avete akarara padivi paakamira kusvikira Patriot atanga quarterback, Drew Bledsoe, akakuvara muna 2001.
Kurasikirwa kweBledsoe kwakava Kuwana kwaBrady sezvo wekupedzisira akawana mukana nekungotungamira timu mukukunda kukuru pamusoro peSt. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Tom Brady Rudo Hupenyu:
Brady murume akaroora uyo akashandura mhiko nemudzimai wake iye zvino kwenguva refu mushure mekune ukama hwakakundikana nemumwe mukadzi. Tinokuunzira mashoko pamusoro pehukama hwekare uye hwezvino.
Chekutanga chaive hukama hwake nemodel uye mutambi Bridget Moynahan. Shiri dzerudo dzakasarudzika dzaive nehukama hwakasimba kwemakore maviri panguva iyo yavakaonekwa nevazhinji kunge mapara akaparadzaniswa.
Zvinosuruvarisa, vakangoerekana vadzivisa rudo rwavo muna December 2006. Mwedzi yakati gare gare Bridget akaziva kuti akanga ane pamuviri, chiitiko chakanga chisina kuuya nyore kuna Brady sezvo akanga atotanga ukama nemudzimai wake iye zvino Gisele Bündchen.
Kunyangwe zvakadaro, mwanakomana wekutanga waBrady John Edward Thomas Moynahan akaberekwa muna 2007 uye vekare-veshiri dzerudo vakaramba vari kure.
Kufambira mberi, Brady akavakirwa panheyo yeukama hwake naGiselle waakasangana naye mu2006 apo shamwari inogadzira zuva pakati pavo.
Vose vakaroorana kwemakore anenge matatu vasati varoorana mu2009.
Imba yavo inokomborerwa nevana vaviri, Benjamin naVivian. Giselle anotambawo basa reamai vekurera kumwanakomana waBrady naMonahan.
Tom Brady Hupenyu Hwemhuri:
Brady akaberekerwa mumhuri ye nhengo nhanhatu tinokuunzira mashoko pamusoro pemhuri yemhuri yake.
Nezve Baba vaTom Brady:
Thomas Brady Sr ndiye baba vanozvikudza veBrady. Iye munhu webhizimisi ane chitupa cheshuwarisi chinonzi Brady nevanakomana. Tomasi ave achinyatsotsigira mwanakomana wake uyo anoreva kwaari segamba rake.
NezvePamusoro Amai vaBrady:
Amai vaBrady, Galynn Patricia, vave vakaroorana nababa vaBrady kwemakore anopfuura 50. Anotsigira zvakanyanya kumwanakomana wake uye anogara achiratidzira kutaridzika kwake kwembiya yepamusoro.
Brady pamberi pemutambo weSuper Bowl wakadaro, akaudza vataridzi kuti aishuvira kuhwina mutambo waamai vake uye akazviita.
Chigumisiro chaireva zvakawanda kuna amai vake avo vave vachitambura nechirwere chakakomba uye chisingazivikanwi.
Nezve Hanzvadzi dzaTom Brady
Zvinenge zvichifadza asi hazvishamisi kuona kuti hanzvadzi dzaBrady dzose dzinomhanya.
Hungu, hazvishamisi. Kufunga kuti vakadhura makwikwi ebhora naBrady pane imwe nguva. Ungatarisira kupi kuti vauye? Zvino hezvino pano zvinoshamisa.
Maureen ndiye mukuru kune vakoma nehanzvadzi yakanaka kwazvo yepolballball uyo aigara achitamba Fresno State. Iye akaroora nevana.
Zvadaro Julie Brady, mutambi wenhabvu yekoroji yaSt. Mary.
Pakupedzisira asi kwete zvachose ndiNancy. Ari gore rakakura kupfuura Brady uye muchengeti weballball uyo akawana rubhadharo kutamba kuYunivhesiti yeKalifornia.
About Brady's Relatives:
Brady ane muzukuru anonzi Maya. Ndiye mwanasikana wehanzvadzi yake huru Maureen uye anotamba bhora renyoro zvakare.
Brady anewo mukuwasha anonzi Kevin Youkilis. Kevin murume waJulie (hanzvadzi yechipiri yaBrady) uye akambotamba baseball yeBoston Red Sox.
Tom Brady Mazita emazita:
Brady ane nicknames dzinounza ruzivo pamusoro pemafambiro ake mumatambo emabhora. Aya mazita ekunyora anosanganisira avo vakanyorwa mune zvakaputirwa Tweet sezvinotevera; Tom Terrific, Touchdown Tom, The Pharoah, Comeback Kid kana Sir uye The GOAT
- Dan Hanzus (@DanHanzus) June 26, 2018
Nekudaro, Brady haana kugadzikana nekusheedzwa kunzi GOAT chinova chirevo cheGreatest of All Times.
Ehe, Brady inogona kunzi ndiyo C. Ronaldo or Lionel Messi yeAmerican nhabvu achifunga chokwadi chekuti iye ndomumwe chete wevatambi vaviri muNFL nhoroondo yekuhwina shanu maSupp Bowls, uye ndiye chete mutambi akahwina vese nefranchise imwe chete.
Kuramba kwake GOAT kunongotaura chete nezvekuzvininipisa kwake.
Tom Brady Biography Chokwadi - Endorsements uye Investment:
Mubairo webasa rakaoma Mune akajairika uye asinganzwisisike Mabasa ibasa rakawanda. Nekudaro, yenhabvu uye kumwe kuyedza kwemitambo, zvinotsigirwa!.
Brady ane mugove wake muhombe mukubvumidzwa uko kunosanganisira avo vaakasaina neArmor, UGG, Tag Heuer, Intel, Shields, Movado, Choke Collar uye Got Milk.
Zvimwe zvinosanganisira avo vane Gorosi, Mvura uye Helicopters, MaPasitori Emvura, Peewee Herman Tattoos, Inogona Kuva Whup Ass uye Sucheri Yakashata. Kubva kubva kune zvibvumirano, Brady ane kambani inonzi TB12. Kuburikidza nekambani, Brady anotungamirira nzvimbo yekudzidzisa iri kuFoxborough.
Akasunungura mabhuku maviri anotengesa zvakanakisisa anopa ruzivo rwekuita mararamiro uye nzira dzaakagamuchira kuti abudirire kwenguva refu. Dzinosanganisira "TB12 nutrition manual" uye "TB12 Method: Sei Kuwana Upenyu Hwakachengetedzwa Peak Performance".
Tom Brady Hupenyu hweMunhu:
Brady ndiye mutambi ane mararamiro azere nezvakasiyana. Pakutanga, Akanaka akatarisana nemutambi uyo akasarudzwa seimwe yevanhu Magazini ye "50 Most Beautiful People" mu2002, yakaroora Super + model asi inoita basa rekuchenjerera paparazzi uyo waasingadi kuva pamwe naye.
Pakukwirira kwebasa rake, Brady akapinda mukati chiitiko chakakurumbira 'deflategate' izvo zvakamuona akamiswa kumitambo mina yekutanga mwaka 2016 NFL mwaka.
Fembera chii?, Brady haana kungomisa kumisikidzwa asi akahwina Super Bowl LI uye Super Bowl MVP mwaka iwoyo. Ndekupi kwakaenda kunetsekana kwepamoyo uye kuhama kwehama 'kuora moyo uye kudzikisira ?.
Sezvo izvo hazvina kukwana, iyo yakasarudzika quarterback inodaidza vaanoshanda navo vacheche!. Taura nezvevacheche mune ino mamiriro, pikicha varume vane muscled vane hombe triceps, biceps ane padyo akafukidzwa misoro uye husky izwi. Apa chienda!.
Kunyange zvakadaro, Brady ndeyeye anofarira vazhinji. Hazvishamisi kuti mudzidzisi wepachikoro chepuraimari akashandisa chiso chake pa Crosswalk Zviratidzo kuti atore pfungwa dzevatyairi vanoramba vachifambisa zvishoma apo pose pavanosvika kunharaunda yechikoro.
Chibereko kune chiratidzo chekufamba mumugwagwa unoramba uchigunzva paWalnut Ave kunze kwechikoro. Zvichida kana Tom Brady ari pachiratidzo, vanhu havangamupi? #PutABradyOnIt pic.twitter.com/3hpTOThPHA
- WalkBoston (@WalkBoston) December 6, 2017
Iye ariwo mutendi ane simba wekurarama munguva ino iye zvino maererano naDan Millan Pano, Iye zvino uye Iyi nguva mantra. Hazvishamisi kuti iye atova mumwe webhokisi reAmerica guru.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Tom Brady Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!